Xiaomi Mi A2 အသစ်၏အသစ် update သည်ကျွန်ုပ်တို့အား 1080p တွင် 60fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည် Androidsis
Xiaomi Mi A2 ကို 1080p နှုန်းဖြင့် 60fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် update ကိုရရှိခဲ့သည်
El Xiaomi က Mi A2တရုတ်နိုင်ငံတွင် Mi 6X ဟုလည်းလူသိများသောကုမ္ပဏီမှအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိနေသည်။ ဒီဟာဟာအသစ်တစ်ခုနဲ့ပါလာတာပါ၊ ပထမမှာ mid-range ကိရိယာကမယူလာခဲ့ဘူး၊ ဒါကပါ FullHD ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ နှုန်းဖြင့် (၁၀၈၀p နှုန်းဖြင့်နှုန်း 60fps).
ဒီအပိုထပ်ဆောင်းကင်မရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအီလက်ထရောနစ်ရုပ်ပုံတည်ငြိမ်မှု (EIS) ကိုပံ့ပိုးမှုပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီပံ့ပိုးထားတဲ့ resolution အသစ်မှာဒီလုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်။ တခါမှာ ၎င်းသည်ယခုလနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး patch ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကဏ္inတွင်အားဖြည့်မှုများပါ ၀ င်ပြီးအသေးစားစနစ်အမှားများကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။
အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် Xiaomi Mi A2 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်သင်၌မရှိသေးပါ။ သို့သော်အချို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်ဤ patch အမျိုးအစားများကိုအနည်းငယ်နှောင့်နှေးစေလေ့ရှိတတ်သည်၊ သင် terminal ကိုရောက်ပြီလားဆိုတာစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့သွားရမည် configuration ကို.
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ ဒီကိရိယာကိုပြီးခဲ့သည့်လကုန်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်, ၎င်းသည်ဗီဒီယိုများ 720p တွင် 120fps၊ 1.080p 30fps နှင့် 2.160p 30fps နှုန်းဖြင့်သာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း 1.080fps ရှိ 60p resolution ကိုထောက်ပံ့ထားသည်။
ရှာတွေ့သည်: Xiaomi Mi A2 နှင့် Mi A2 Lite ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပြီး ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင် FullHD + resolution ရှိတဲ့ Corning Gorilla Glass 5.99 ကာကွယ်မှု၊ Qualcomm Snapdragon5octa-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 660 / 4GB RAM၊ 6/32 / 64GB သိုလှောင်မှုနေရာပါရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုနှင့် Quick Charge 128 မြန်ဆန်သောအားသွင်းနည်းပညာဖြင့် 3.010mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ဒီအပြင်, ပစ္စည်းတွင် 12 နှင့် 20MP ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုရှိပြီးအနောက်ဘက်တွင်ရှိသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်, 20MP shooter သည် selfies နှင့် video call များကိုတာဝန်ယူသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi Mi A2 ကို 1080p နှုန်းဖြင့် 60fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် update ကိုရရှိခဲ့သည်
ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည် Android 9.0 Pie တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ